mayhninsi – စာမျက်နှာ 15 – MBC
နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် အမျိုးသားဌာန က ဦးဆောင်၍ နှစ်စဉ်ပြုလုပ်မြဲဖြစ်သော မုတ်သုံသမ္မာကျမ်းစာသင်တန်းကို ယခု ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်လည်း (၄၂)ကြိမ်မြောက်အဖြစ် (၂၉.၆.၂၀၁၉ မှ ၂၈.၉.၂၀၁၉) နေ့အထိ အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်း နံနက်(၉း၀၀)နာရီမှ မွန်းလွဲ(၁း၀၀)နာရီအချိန်တွင် အသင်းချုပ် အောက်မေ့ဖွယ်ခန်းမ၌ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ရာ ဝိညာဉ်ရေးရာ ရင့်ကျက်မှုနှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ရန်အတွက် အားလုံးကို လှီုက်လှဲစွာဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ […]
“ မြေ နှင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ နှင့် ပြည်သူတို့၏အခွင့်အရေး”
နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် ခရစ်ယာန် လူမှုဝန်ထမ်းခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနမှ ဦးဆောင်၍ “ မြေ နှင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ နှင့် ပြည်သူတို့၏အခွင့်အရေး” သင်တန်းကို အသင်းချုပ် အစည်းအဝေးခန်းမ(၃)၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၁-၁၄)ရက်အထိ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ လူ/ဒေ အဖွဲ့ချုပ်များမှ ၂၉ဦး၊ ရုံးဝန်ထမ်း ၄ဦး နှင့် ကော်မတီဝင် […]
ကမ္ဘာ့ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ ၂၀၁၉
နှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေကျ ကမ္ဘာ့ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ အစီအစဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံ ခရစ်ယာန် အသင်းတော်များ ကောင်စီ MCC နှင့် နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် MBC တို့ ပူးပေါင်း၍ ၅.၆.၂၀၁၉ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက်(ရး၀၀)နာရီအချိန် နှစ်ခြင်း အသင်းချု့်ဝင်းတွင် နှစ်ခြင်း အသင်းချုပ် ဥက္ကဌ Rev. Dr. ဦးမောင်မောင်ရင် […]
ဇွန် 8, 2019
အသင်းချုပ် (၁၇၉) ကြိမ်မြောက် အမှုဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး
မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းချုပ်၏ (၁၇၉) ကြိမ်မြောက် အမှုဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉-ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၄ -၇) ရက်တွင် နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ်၊ ကူရှင်ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် ဥက္ကဌ Rev. Dr. ဦးမောင်မောင်ရင် နှင့် ဒုဥက္ကဌ Dr. အူဗျစ်ဂျာဘူ တို့ ဦးဆောင်လျက် အသင်းချုပ်၏ လူမျိုးစုနှင့် […]